> Resource > Android > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Photos ka HTC yaabiyo 4G
Sidee ayaan undelete sawiro ka HTC yaabiyo kaadhka xusuusta telefoonka?
Waxaan la sawiro wareejinta ka telefoonka, laakiin waxaan si qalad ah la tirtiro sawiro qaar ka kaadhka xusuusta telefoonka ee ka hor inta aan iyaga keeni karaan, waa hab si ay u soo ceshano? Caawimaad kasta oo la jeclaan lahaa !! Telefoonka waa HTC yaabiyo ah.
Wax First hore, inuu ka soo kabsado photos tirtiray taleefanada HTC yaabiyo, aad u baahan tahay si ay u joojiso isticmaalka telefoonka ama kaadhka xusuusta sida ugu dhaqsaha badan ka dib shilka. "Delete" amarka ka dhigaysa kaliya sawirada aan la arki karin oo ka dhigan meeshii ay markii hore ka qaaday sida maran si ay u qoroto. Sawirrada tirtiray aan run ahaantii si buuxda u tirtiraa. Iyada oo ah qalab ku haboon kabashada sawir, weli waxaad haysataa fursad wanaagsan si ay u soo ceshano ka hor ay overwritten by files cusub.
Sidee inuu ka soo kabsado photos tirtiray ka HTC yaabiyo
Si aan ku bilaabo, hesho barnaamij lagu kalsoonaan karo HTC yaabiyo kabashada sawir. Ka taxaddar in aad doorato mid runtii waxa uu sheegaayo, sababta oo ah kuwo xunba dhaawici doono sawiro aad oo waxaan ka dhigi unrecoverable. Haddii aad weli wax fikrad ah oo ku saabsan, waxaad qaadan kartaa aan soo jeediyo: Wondershare Photo Recovery , ama Wondershare Photo Recovery for Mac , taas oo 100% lagu kalsoonaan karo. Labada of software-ka kaa caawin kara inaad soo kabsado photos tirtiray taleefanada HTC yaabiyo, iyo sidoo kale video iyo maqal ah files. Waa maxay dheeraad ah, waxaad u isticmaali kartaa inuu ka soo kabsado files taleefanada kale HTC, teleefoonada gacanta Samsung, telefoonada Blackberry, iwm Xalka dhan waxaad qaadataa 3 tallaabo.
Download version maxkamad free of this HTC yaabiyo software kabashada sawirka hadda. Dooro version saxda ah ee computer.
Step1. Burcad barnaamijka HTC yaabiyo kabashada sawir
Connect aad telefoon ama kaadhka xusuusta in computer ka hor inta aadan wax ka qaban kale, iyo in la hubiyo waxa lagu ogaan karaa kombiyuutarka iyo u muuqataa sida warqad drive ee "My Computer" a. Markaas aan bilowno barnaamij oo guji "Start" in interface ugu muhiimsan sida raaco si ay u bilaabaan soo kabashada sawir HTC yaabiyo.
Step2. Sawirka files tirtiray aad HTC yaabiyo
Halkan, waxaad telefoon sidoo kale lagu baari doono barnaamijka iyo qaab sida warqad drive ah. Waxaa Dooro iyo guji si "Sawirka" tirtiray sawiro ku yaal.
Step3. Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan sawirada tirtiray ka HTC yaabiyo
Skaanka aad qaadan doonto arrin daqiiqo. Waxaad ku eegaan kartaa sawiro recoverable sawirka kadib. Waxaad calaameysaa kuwa aad rabto in aad dib u soo ceshano oo wada badbaadin la mid click adigoo gujinaya "Ladnaansho" button.
Fiiro gaar ah: Ha badbaadin xogta soo kabsaday aad HTC mar yaabiyo telefoonka ama kaadhka xusuusta. Raadi meel kale, waayo, sida on your computer ama disk kale dibadda, Ammaanka awgiis.
Video tutorial soo kabashada sawir HTC yaabiyo
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Photos ka BlackBerry Shuclada